RPA အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သောအချက် (၅) ချက် - Vanguard
Home » RPA အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သောအချက် (၅) ချက်
Posted by Vanguard on November 9, 2020 .
Robotic Process Automation (RPA) ဆိုတာ Business Process တွေကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံး(Rule-Based) တွေကို အခြေခံထားပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ရတဲ့ (Repetitive Business Process)တွေကို RPA နည်းပညာနဲ့ အလိုအလျောက် ပြုလုပ်တဲ့အခါ Value ပိုပေးနိုင်တဲ့ Business Activity တွေကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ RPA ဆိုတာ Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Robotics နဲ့ IoT (the Internet of Things) စတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ technology solution ပဲဖြစ်ပါတယ်။
RPA ကနေ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ Automation ကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။ Gartner ရဲ့ လေ့လာချက်အရအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ (၈၅)% ဟာ ၂၀၂၀ မှာ RPA ကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒီလို အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေပြီးရင်တော့ အသေးစားနဲ့ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေဟာ RPA ကို ပုံမှန် လုပ်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အသုံးပြုလာကြတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းမှာ RPA အသုံးပြုဖို့ မစဉ်စားမိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ခုချိန်ကစပြီး စဉ်းစားထား သင့်သောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကနေ စပြီး စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
RPA အကြောင်းပြောကြတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ အသုံးများကြတဲ့ စက်ရုပ် (Robot) တွေကို ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ RPA ဆိုတာ Software Robot တွေ – တနည်းအားဖြင့် Data ယူတာ၊ Data သွင်းတာလိုမျိုး ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေရသော တာ၀န်များကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် Business Solution ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော လူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေတဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးရတဲ့အချိန်တွေကို RPA အသုံးပြုပြီးလျှော့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအနေ နဲ့ ဖြင့် Productivity တိုးဖို့၊ လူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Human Error တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ဖို့၊ Repetitive Task တွေထက် ပို Value ရှိပြီး Robot တွေမလုပ်ဆောင်နိုင် တဲ့အလုပ်တွေ (e.g အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ Customer Query တွေကို ဖြေရှင်းခြင်း၊ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းဗျူဟာထုတ်ခြင်း) အတွက် RPA ကို အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ RPA ကို Process အသစ်တစ်ခု အနေနဲ့ စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ RPA က ရှိပြီးသား စနစ်တွေ၊ Application တွေကို ပိုပြီး တိုးတက်သွားအောင်၊ ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ Physical Infrastructure ပိုင်းမှာသာ ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် RPA ကို Implement လုပ်လိုက်ခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အချိန်တွေ၊ Error တွေ၊ အခြားမလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် RPA ကို Quick Win တစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် RPA ဆိုတာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ Web Form တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Auto-Complete လို Function မျိုးတွေက RPA ရဲ့ ကနဦး ပုံစံပါပဲ။ ယနေ့ခေတ် RPA Tool တွေမှာတော့ Customer Service Chatbot (ရိုးရှင်းတဲ့ Customer Query တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အသုံးပြုပါတယ်) တွေအထိ ပါဝင်လာပါပြီ။
RPA ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အခြားနေရာတွေကတော့-
စာရွက်စာတမ်းတွေမှတဆင့် Digital စနစ် ဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်း
Insurance Claim  တွေထည့်ခြင်း၊ Process ပြုလုပ်ခြင်း
Credit Card Application တွေကို Process ပြုလုပ်ခြင်း
CRM System ထဲသို့ Customer Data အသစ်တွေ ထည့်သွင်းခြင်း
Client နဲ့ Patient Appointment တွေအတွက် အချိန်စာရင်းဆွဲခြင်း
ရိုးရှင်းပြီး ထပ်တလဲလဲမေးလေ့ရှိတဲ့ Tech Support Query တွေကို ဖြေဆိုခြင်း
Transactions တွေကို Process ပြုလုပ်ခြင်း
Digital System တွေဆီက အချက်အလက်တွေကို ရယူခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါ TECHNOLOGY TREND တွေအတွက် သင့်လုပ်ငန်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
အရာရာတိုင်းက နည်းပညာပြောင်းလဲမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် Business Leader တွေအနေနဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေကို သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အဆင့်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို သိရှိလိုကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်လည်း ဒီလို ကြုံတွေ့နေမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အဆင့် (၅)ဆင့်ကို လိုက်နာဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
STEP 1. SELF-EDUCATE လုပ်ပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို Educate လုပ်ခြင်းက ပြောင်းလဲဖို့ ပြင်ဆင်ရာမှာ အသက်တမျှ အရေးကြီးပါတယ်။ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ၊ RPA နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Resource တွေကို Online မှာ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – RPA Solution Provider တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ UiPath မှာ အခမဲ့ Training Course တွေ အများအပြားရှိတဲ့ Online Academy ရှိပါတယ်။ RPA ကို အသုံးပြုရာတွင် ရှိထားသင့်တဲ့ Role တွေ(ဥပမာ- Business Analyst, Implementation Manager) အလိုက် Course တွေကို Category ခွဲထားပါတယ်။ RPA Developer တွေ၊ လေ့လာသူတွေပါဝင်ပြီး Tool တွေ၊ Strategy တွေနဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေကို မျှဝေကြတဲ့ Community တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ RPA ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို နားလည်စေဖို့ ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ Robot တွေကို အခမဲ့အသုံးပြုပြီး စိတ်ကြိုက် Customized လုပ်ကာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
STEP 2. ဘယ်လို TASK အမျိုးအစားကို AUTOMATED လုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတာ နားလည်အောင်လုပ်ပါ
RPA လုပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး Task တွေမှာ ထပ်တလဲလဲ ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်ရတဲ့ Task တွေဖြစ်တဲ့ Record တွေ ရှာဖွေခြင်း၊ Data တွေ ကူးပြောင်းခြင်း စတဲ့ “Busy Work” ‌တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို Task အမျိုးအစားတွေက Automation လုပ်သင့်တဲ့ အဓိကအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ Decision Making စတဲ့ အလုပ် တွေကိုတော့ Automation ပြုလုပ်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
STEP 3. ဘယ်လို TASK များကို AUTOMATION ပြုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ပိုပြီး တိတိကျကျ ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
Automation လုပ်လို့ ရတာနဲ့ Automation လုပ်သင့်တာနဲ့ အတိအကျ မတူပါဘူး။ Automation လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ အလုပ်တွေထဲကမှ ဘယ်လိုအလုပ်တွေကို Automation လုပ်ကြမလဲ၊ လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ဖို့ ပြန်လည် ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် မလုပ်မဖြစ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအလုပ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေ အချိန်အများအပြားပေးရတဲ့ အလုပ်မျိုးကို Automation လုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခါ RPA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ထပ်တလဲလဲအလုပ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ရည်မှန်းထားတဲ့ Quick Win ကို လည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
STEP 4. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ SOLUTION တွေနဲ့ TOOL တွေကို ရှာဖွေလေ့လာပါ
သင့်အဖွဲ့အစည်းမှာ RPA အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းတွေကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ Deployment လုပ်ရာမှာ ချောမွေ့အောင်မြင်စေဖို့ အလားအလာကောင်းတဲ့ Partner တွေနှင့် ရရှိနိုင်တဲ့ Technology တွေကို ရှာဖွေလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးသား Technology Infrastructure တွေအတွက်လည်း ကြိုတင် စဉ်းစားထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ – RPA ကို ရှိပြီးသား Infrastructure ပေါ်မှာ အသုံးပြုမှာလား၊ RPA အသုံး ပြု ပြီးထွက်လာတဲ့ အချိန်တွေ၊ လူအင်အားတွေကို ဘယ်လို ပြန်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှာလဲ။
STEP 5. RPA PARTNER ကို ရွေးချယ်ခြင်း
Solution တွေထဲမှာ ဘယ်ဟာက ကိုယ်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ။ Provider အမျိုးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့် Industry ထဲမှာ အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသား သူကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူ့အရင်းအမြစ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း Automation Process အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။
RPA ဟာ စျေးကွက်ထဲမှာ အလျင်မြန်ဆုံး တိုးတက်လျက်ရှိတဲ့ Enterprise Software တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် RPA အတွက် ရရှိနိုင်တဲ့ Offering များစွာရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က Repetitive Task တွေကို လျှော့ချပြီး ပိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ အာရုံစိုက်လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီး အကျိုးအမြတ်တွေထွက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး RPA Solution တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ UiPath ကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Reference from Forbes:
#UiPath #RPA #VanguardMyanmar